Kitra Afrikanina : nampian’ny mpitsara ny Wydad, vao nandresy ny Cnaps Sport | NewsMada
Kitra Afrikanina : nampian’ny mpitsara ny Wydad, vao nandresy ny Cnaps Sport
Tratry ny antsojay nataon’ny mpitsara ny Cnaps Sport, teo amin’ny lalao mandroso, amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, taranja baolina kitra. Vokany, lavo tamin’ny isa mavesatra ny ekipa malagasy.
Resin’ny Wydad, tamin’ny isa mavesatra 5 noho 1 ny Cnaps Sport, ny asabotsy alina, tao amin’ny kianja Mohamed V, Maraoka. Fihaonana tafiditra amin’ny lalao ampahavalon-dalana mandroso, hiadiana ny ho tompondakan’i Afrika. Vokatra izay, namboarin’ny mpitsara satria nitongilana tamin-dry zareo Malianina, Boubou Traoré.
Porofon’izany, ny “penalty” indroa misesy nomeny, tao anatin’ny 30 mn nilalaovana. Ny voalohany, teo amin’ny minitra faha-3, izay nambarany fa nandray baolina tamin’ny tanana tao anatin’ny faritra tsy azo ivalozana i Feno. Maty izany rehefa nodakan’i El Hajhouj. Nanimba ny toe-tsain’ny mpilalaon’ny Cnaps io baolina tafiditra aloha be io. Mbola niampy indray izany, teo amin’ny minitra faha-8, taorian’ny “corner” tsy tafavoakan’ny vodilaharana tsara ka tafiditr’i El Haddad.
Niezaka niarina avy eo ny Cnaps Sport, saingy tsy tafavoaka mihitsy. Mbola nahatafiditra baolina fahatelo indray ny Wydad, teo amin’ny minitra faha-13, izay matin’i El Haddad, taorian’ny valim-panafihana haingana.
Tsy kivy fa nanafika hatrany ny Cnaps Sport, ary nisy dakan’i Njiva teo amin’ny minitra faha-15 fa nifanitsy tamin’ny mpiandry tsatobin’ny Wydad. Nisy “penalty”, tokony ho azon’ny Cnaps teo amin’ny minitra faha-20, rehefa voafingana tao anatin’ny “surface de reparation” izy saingy nolazain’ny mpitsara fa nanao “simulation”, ka dia nahazo karatra mavo. Nanampy isa fahefatra ny Maraokanina, teo amin’ny minitra faha-30, tamin’ny alalan’ny “penalty”, rehefa mody nianjera tety ivelan’ny faritra tsy azo ivalozana ny lohalaharana maraokanina. El Hajhouj ny namono izany.
Nirarakopana ny karatra mavo
Nanao izay mety mihitsy ingahy Boubou Traoré, tamin’ny fomba fitsarana. Nahazo karatra mavo avokoa izay mandona na mampianjera ny mpilalaon’ny Wydad. Anisan’ny nahazo izany, i Ando, kapitenin’ny ekipa. Na izany aza, niezaka nanafaingana sy nitady hirika hamonoana baolina ny Cnaps. Nisy baolina tokony ho tafiditr’i Rado, teo amin’ny faha-35 mn saingy tsy voadaka tsara ny baolina.
Nampihena ny isa i Nono, teo amin’ny minitra faha-41, rehefa nahazo tolotra tsara avy amin’i Rinjala. Io isa 4 noho 1 io no nentin’ny roa tonta niala sasatra.
Mbola nanohy ny fitongilanany hatrany ny mpitsara teo amin’ny fidirana faharoa. Betsaka ihany koa nefa ny fanafihana malagasy, saingy tsy nety nahafaty baolina ry Njiva sy Nono ary Mika. Ry zareo Wydad indray aza, nanampy isa fahadimy, tamin’ny alalan’ny lohan’i Ondama, teo amin’ny minitra faha-81.
Amin’ny asabotsy 19 marsa ny lalao miverina any Mahajanga. Sarotra ny fandidiana nefa azo atao tsara ny mandresy ny Wydad, raha ny tati-baovao.